Vaky boky Lasa mitaiza ireo mponina eny amin’ny faritra iva
Zary lasa fialam-bolin’ireo ankizy sy olon-dehibe eny amin’ny faritra ambany tanana eto an-drenivohitra amin’izao ny vaky boky no sady fanovozam-pahalalana ihany koa. Voakasik’izany ny “Centre de lecture et d’information et de la culture” ( CLIC) etsy Antohomadinika, izay mandray ankizy sy olon-dehibe manodidina ny 1.000 isa hatreto raha araka ny fanazavan-dRaonison Andrianjaka, tompon’andraikitra eo anivon’ny tambajotra CLIC eto Antananarivo.
Tarika Ny Ainga Miala any ny « Vaky sehatra 2018 »
Raikitra ! Ny tolakandron’ny Alatasinain’ny Paska 02 aprily ho avy izao, etsy Antsahamanitra, no hanatanterahana ny seho goavana “Vaky sehatra 2018” ho an’ny tarika Ny Ainga. Fomba amam-panao efa lasa fotoam-bita ho an’ireo Mpankafy ny “Vazon’ny tanàna” sy ity tarika tsy mihira fitiavana fa ampihirain’ny fitiavana ity ny seho “Vaky sehatra” . Ankoatry ny fivimbinan’ny tarika ireo “Vazo milay” efa fantam-bahoaka hisy ihany koa ny fihirana ireo hira vaovao toy ny “Izaho vadinao”…